Application Form | Search Results | DEPARTMENT OF MARINE ADMINISTRATION
February 2, 2020 DMA-MM
နိဒါန်း ၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက် နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအအမှတ် (၂၈/၂၀၂၀) “မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပင်လယ်ပြင်သွား ရေယာဉ်များတွင် အလိုအလျောက် ခွဲခြားသိရှိနိုင်သည့် စနစ် (Automatic Identification System –AIS)” တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ”အရ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ဤလမ်းညွှန်ချက်အား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ပင်လယ်ပြင်၌ အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 ၏ အခန်း ၅၊ စည်းမျဉ်း (၁၉) ၏ ပြဌာန်းချက်ပါ … Continue reading AIS စနစ်တွင် ပါဝင်ရမည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ (Performance Standard) ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် (Guidance) →
အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆောင်ရွက်လိုပါက ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ လေ့ကျင့်ရေးဌာနစုတွင် လာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်- ၁။ သင်တန်းကျောင်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင် Maritime Education and Training (MET) Institute or MET Centre Approval လက်မှတ်ထုတ်ယူရန် နှင့် လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် လျှောက်ထားခြင်း။ ၂။ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားရာတွင် အတည်ပြုပေးသော Course Approval for Certificate of Competency သို့မဟုတ် Certificate of Proficiency လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်အတွက် လျှောက်ထားခြင်း။ ၃။ သင်တန်းကျောင်းများမှ သင်တန်းအပတ်စဉ်များအား စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ခွင့်ပြုရန်နှင့် သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်း အတည်ပြုရန်အတွက် သင်တန်းသား စာရင်းလျှောက်ထားခြင်း။ ၄။ … Continue reading ရေကြောင်းဌာနခွဲ၊ သင်တန်းဌာနစု →
The following medical doctors have been approved by the Department of Marine Administration to conduct Myanmar Seafarers Medical Examinations and Certifications. Download here!!!: DMA approved Medical Doctors list as on October 2021 Download here!!!: DMA approved Optometric Examiner list as on October 2021 List of DMA Approved Medical Referee (2021) Sr.No Name Specialist Address Contact … Continue reading Updated List of DMA Approved Medical Doctors →
Date Directives No. Description 12/04/2021 ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၄/၂၀၂၁ တိုင်းတာစစ်ဆေးရေးမှူးနှင့် စစ်ဆေးရေးအရာရှိများအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် Qualification and Training Requirements for Flag State Surveyors and MLC Inspectors 12/04/2021 ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၃/၂၀၂၁ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် ဟန်ချက်ညီစနစ်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် Survey Guidelines under the Harmonized Sytem of Survey and Certification (HSSC) 2019 12/04/2021 ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂/၂၀၂၁ အလံတင်နိုင်ငံ၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် Flag State Implementation System 12/04/2021 ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁ ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာ … Continue reading Directives →